China dry ground mica ifektri kanye nabaphakeli | I-Huajing
Umhlabathi owomile we-mica powder we-Huajing uyancintisana ngentengo futhi uzinzile ngekhwalithi. I-pure pure mica powder ekhiqizwa ngokugaya ngaphandle kokushintsha noma iyiphi impahla yemvelo. Phakathi nakho konke ukukhiqizwa, samukela inani eligcwalisiwe lokugcwalisa uhlelo ukuqinisekisa ukuthi ikhwalithi yomkhiqizo;
I-Mica eyomile （yokugcwalisa）
D-60 USilver White 80 kuya ku-83 170 ＞ 98 ＜ 500 ＜ 0.5 4.5 ～ 5.5 7.8 Cha P 10ppm 0.28
D-100 USilver White 82 kuya ku-86 120 ＞ 98 ＜ 500 ＜ 0.5 4.5 ～ 5.5 7.8 Cha P 10ppm 0.26
D-200 USilver White 82 kuya ku-86 68 ＞ 98 ＜ 300 ＜ 0.5 4.5 ～ 5.5 7.8 Cha P 10ppm 0.24
D-300 USilver White 83 ～ 86 50 ＞ 98 ＜ 500 ＜ 0.5 4.5 ～ 5.5 7.8 Cha P 10ppm 0.23
D-400 USilver White 84 kuya ku-88 45 ＞ 98 ＜ 500 ＜ 0.5 4.5 ～ 5.5 7.8 Cha P 10ppm 0.22
Imiphumela Ehlukile ye-PP Ngemuva Kokungeza i-Mica, i-Talc, i-Caco3, i-Glass Fiber
Impahla Akukho ukugcwaliswa I-PP + 40% I-PP + 40% I-PP + 30% I-PP + 40% I-PP + 40%
I-PP i-talc (impahla) I-CaCO3 (impahla) Ingilazi yefayibha I-mica mineral yemvelo Uqedile Mica
Amandla eqine （Mpa) 4930 4270 2770 6340 4050 6190
Amandla okugoba （Mpa) 4450 6420 4720 10060 6450 9320
Ukugoba modulu / (Gpa) 0.193 0.676 0.421 0.933 0.934 1.04
Amandla we-notched (KJ / m2) 0.45 0.45 0.75 0.79 0.7 0.65
136 162 183 257 190 226
Hot deformation lokushisa ℃
Ukuqina (D ubulukhuni umhloli) 68 72 68 69 68 73
Isilinganiso se-Shrinkage (ubude bendlela)% 2 1.2 1.4 0.3 0.8 0.8
Umsebenzi Omkhulu weMica
Umhlabathi owomile we-mica powder we-Huajing uyancintisana ngentengo futhi uzinzile ngekhwalithi. I-pure pure mica powder ekhiqizwa ngokugaya ngaphandle kokushintsha noma iyiphi impahla yemvelo. Phakathi nakho konke ukukhiqizwa, samukela inani eligcwalisiwe lokugcwalisa uhlelo ukuqinisekisa ukuthi ikhwalithi yomkhiqizo; Inqubo yokuhlola isebenzisa inqubo ye-patent eqinisekisa ukuzinza kwekhwalithi nezinhlayiya ezisatshalaliswa kahle, bese yanelisa isicelo samakhasimende aphezulu. Njengesici esiphakeme, i-Huajing mica powder isetshenziswa kabanzi njengokugcwalisa izinto kupulasitiki.
Ukusetshenziswa kweMica ku-PP
I-Mica powder inezinto ezinhle kakhulu zikagesi, amandla okuphuka aphezulu, i-dielectric engaguquki njalo, into ephansi yokulahleka nokumelana okuhle kwe-arc Ngasikhathi sinye, i-mica ine-hygroscopicity ephansi kanye nokushisa okuphezulu okushisayo okushisayo lapho i-mica isetshenziswa njengokugcwalisa, okunenzuzo ukugcina izakhiwo zikagesi endaweni enomswakama nokushisa okuphezulu. Isibonelo, lapho i-50% mica ingezwa ku-PP, i-voltage breakdown iphindwe kabili. Ukusetshenziswa kwe-mica eguquliwe i-PP ezimotweni zezimoto nezasekhaya ukukhiqiza ideshibhodi yezimoto, indandatho yokuvikela ukukhanya, i-motor fan nezinye izingxenye ngokusobala kungathuthukisa ukuqina kwayo, ukumelana nokushisa, ukuqina kobukhulu kanye nokuncipha kokubumba.
Ukusetshenziswa kweMika ku-PP-R
Ipayipi le-PP-R luhlobo olusha lwempahla yokwakha eluhlaza ye-PP engahleliwe esetshenziswa kakhulu eminyakeni yamuva. Ukumelana nokushisa kwalo kukhulu noma kulingana nama-degree angama-90, izindleko eziphansi futhi kulula ukuzisebenzisa. Ipayipi le-PP-R eline-mica linamandla aphezulu, ukumelana nokushisa okuhle, ukumelana nokugqwala okuqinile, futhi izindleko zincishisiwe kakhulu, ngakho-ke inethemba lokuthuthuka kwemakethe ebanzi.
Langaphambilini Imvelo mica powder
Olandelayo: I-Phlogopite mica powder
I-Dry Ground Biotite Mica
Indlela Eyomile Yomhlabathi
I-Dry Ground Mica Powder
IGround Ground iPhlogopite Mica